‘समाचारमा भनिए जस्तै दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु’ – Karnalisandesh
‘समाचारमा भनिए जस्तै दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु’
प्रकाशित मितिः १५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०८:५१ November 1, 2019
कालिकोट। जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बम ‘पलाँती कान्छा’ले आफ्ना विरूद्धमा आएका समाचारहरू भ्रम र एकपक्षिय भएको दाबी गरेका छन्।
लोकान्तर नामक अनलाइन पत्रिकाले ‘आफ्नै घरमा गाउँपालिकाको कार्यालय राखेर भाडा असुल्दै अध्यक्ष’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि अध्यक्ष बमले सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत स्पष्टिकरण दिएका छन्।
अध्यक्ष बमले समाचारमा भने जस्तै दोषी प्रमाणीत भए आफू जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। समाचारमा विज्ञापन विनै आफ्नो घर सरकारी भाडामा दिएको, नीजि मेडिकल बन्द गराएको, आफन्तलाई जागिर दिएको जस्ता आरोपहरू लगाइएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘यो समचार लेख्ने पत्रकार मोहोदयलाई म त चिन्दिन। तर, मेरो कामको बारेमा थाहा छ र परिचित छु। जति दोष लगाको छ। यो सहि र गलत छ भने जस्तो सुकै कारबाही भोग्न तयार छु। यसलाई अरू उपहार दिन नसके पनि एक बोतल औकात अनुसारको लोकल चाहिएको छ भने पठाई दिउँला। माग यहि त होला। हैन र हजुर। चेतना भया।’
हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष बमलाई समाचारमा आएका आरोपका बारेमा सोध्दा उनले भने,‘सबैभन्दा पहिले त समाचारमा भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। सञ्चारमाध्ययमले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो। सुर्खेत बसेर कालिकोटको पलाँताका बारेमा कति नै थाह हुन्छ र ? अर्को कुरा पत्रकार साथीले वडाको योजना र उपभोक्ता समिति कसले बनाउछ? त्यो कसको जिम्मेवारी हुन्छ ? त्यो जान्न आवश्यक छ। गापाले वडाको उपभोक्ता समिति निमार्ण गर्छ ?’
उने अगाडि भने,‘५० प्रतिशत ठेक्का आफूले लिन्छन् भन्ने आरोप लगाइएको छ। १७ लाखको योजनालाई १ करोड ५० लाख भनेर लेखिएको छ। त्यो योजना अघिल्लो वर्षको हो। पत्रकारलाई पलाँता बमहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो भन्नेसम्म थाह रहेन छ। कुनै बम उपभोक्ताको अध्यक्ष बन्यो भने अध्यक्षको आफन्त बाहेक अरू नहुने रहेछ? अनि अर्को कुरा कार्यकारी प्रमुख गापा अध्यक्षले नियुक्त गर्छ कि स्थानीय विकास मन्त्रालयले ? यस्ता हावा कुरा लेखेर हुन्छ ?’